Entrepreneur is livingafew year of your life like most people won’t.
စွန့်ဦးတီထွင်သူဆိုတာ နှစ်ကာလခဏအတွင်းမှာတော့ လူအများမလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ စွန့်စားနေထိုင်ရပေမဲ့…
So you can spend the rest of your life like most people can’t.
ကျန်ရှိတဲ့ နောင်နှစ်များစွာမှာတော့ လူအများမလုပ်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်ကြမဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူများသို့ ယခုစာသားဖြင့် ဂုဏ်ယူအားပေးလျှက်ပါ…
What is Entrepreneurship (စွန့်ဦးတီထွင်မှုဆိုရာမှာ…)
စွန့်ဦးတီထွင်သူနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေါင်းစပ်ပြီး Entrepreneus + Function (E + F) စွန့်ဦးတီထွင်မှုလို့ ဆိုပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူဆိုတာ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ စီးပွားရေးသို့ ဦးဆောင်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
Opportunistic Entrepreneur - အခွင့်အရေးမြင်တက်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူ…
ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖန်တီးပြီး အခွင့်အရေးတွေကို ရှာဖွေတက်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Alibaba ထူထောင်ပြီး ကမ္ဘာ့ကိုထိုးဖောက်ခဲ့သူ Jack Ma သကဲ့သို့သော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
Incubate Entrepreneur - တီထွင်ဖန်တီးတက်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူ…
ခေတ်ကို လိုအပ်ချက်ကို တီထွင်ဖန်တီးပြီး စီးပွားရေးဖော်ဆောင်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ကို စတင်တည်ထွင်သူ Steve Jobs သကဲ့သို့သော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
Acqustitive Entreprener - ရင်းနှီးမြုပ်နှံသော စွန့်ဦးတီထွင်သူ…
စီးပွားရေးကို ကိုယ်တိုင်စွန့်ဦးတီထွင်မလုပ်ပဲ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဖြင့် စီးပွားရှာသော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်သူဌေးကြီး Li Ka-Shing သကဲ့သို့သော စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေရော လက်ရှိပေါ်ပေါက်လာတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်တွေ၊ အခွင့်အရေးတွေမှာ… … Opportunistic Entrepreneur - အခွင့်အရေးမြင်တက်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူ… Incubate Entrepreneur - တီထွင်ဖန်တီးတက်သော စွန့်ဦးတီထွင်သူ… Acqustitive Entreprener - ရင်းနှီးမြုပ်နှံသော စွန့်ဦးတီထွင်သူ… ပုံစံတမျိုးမျိုးဖြင့် Innovation တီထွင်ခြင်း + Risk Taking စွန့်စားခြင်း + Leading ဦးဆောင်ခြင်းဖြင့် ကြိုးစားနိုင်ဖို့ အားပေးပါရစေ။
စွန့်ဦးတီထွင်မှု လမ်းညွှန်ချက် Seeking Opportunity – Innovation Market အခွင့်အရေးရှာဖွေပြီး၊ ဈေးကွက်ကို ဖန်တီးကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုရင်…
Study Hard – Learn Investment & Millionaire>
ပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ လေ့လာပါ။ အောင်မြင်နေတဲ့ မီလျံနာတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို လေ့လာပါ။
Save Money – Save for Future Investment> ငွေကြေးကြိုတင်စုဆောင်းပါ။ အနာဂတ် အခွင့်အရေးတွေကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံစုဆောင်းပါ။
5 Years Plan – Goal setting for future plan > ၅ နှစ်စာ စီမံကိန်းရေးဆွဲထားပါ။ ကိုယ်သွားလိုတဲ့ ပန်းတိုင်အတွက် အနာဂတ်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ အစီအစဉ်ရေးဆွဲပါ။
Investment Decision – Risk – Benefit, Scablity ROI > ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ဆုံးဖြတ်ပါ။ စွန့်စားမှုနှင့် အကျိုးကျေးဇူး တွက်ချက်ပြီး၊ အမြန်ဆုံးသော ၀င်ငွေပြန်ရမှုနှုန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဆောင်ရွက်ပါ။
Expansion Business - Leverage Business System > စီးပွားရေးချဲ့ထွင်ပါ။ တခြားသော အချိန်၊ ဈေးကွက်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၊ စနစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ပါ။ ဒီအချက်တွေဟာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတဦးဖြစ်လာဖို့ အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူဆိုတာ Think and act differently အများနဲ့မတူညီတဲ့ ရှုဒေါင့်အသီးသီးမှ တွေးခေါ်နိုင်သူ၊ ဖန်တီးတည်ဆောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်မှုကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အဓိကအချက် (၂-ချက်) ရှိပါတယ်။
Business Partner, Mentor, Teacher - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အကြံညာဏ်ပေးနိုင်သူများ၊ ဆရာများထံမှ လေ့လာခြင်း၊ အတွေ့အကြုံယူခြင်းအားဖြင့်၎င်း…
Impressing to Success Business Leader - အောင်မြင်သော စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များသို့ အားကျခြင်း၊ စံနမူနာယူခြင်း၊ လေ့လာခြင်းအားဖြင့်လည်း စွန့်ဦးတီထွင်မှု အတွေးအခေါ်များစွာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဟောပြောသူဖြစ်တဲ့ Tony Robin ကပြောဖူးပါတယ် Find Success Business Leaders, သူဖြစ်ချင်တဲ့ စီးပွားရေးအောင်မြင်နေသူကိုရှာဖွေပါ၊ Follow the way what they are doing, သူတို့ကြိုးစားတဲ့အတိုင်း နမူနာယူ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ၊ So, you will also be success …! ဒါဆို ကိုယ်လည်းတနေ့မှာသူတို့လို အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့ ဈေးကွက်အလားအလာ၊ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာချိတ်ဆက်လာမှု Tourism လုပ်ငန်းတွေ၊ FDI, AEC ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတိုးတက်လာမှု Commercial ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ခေတ်ပြိုင်တိုးတက်လာမှုလိုအပ်ချက် Education ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်လာမှု Service ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ အောင်မြင်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူဖြစ်ဖို့ Profession ကိုယ်လုပ်မဲ့ စီးပွားရေးကို ကျွမ်းကျင်ဖို့၊ Partner လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းရှိဖို့၊ Prospect အနာဂတ်ညာဏ်အမြော်အမြင်ရှိစွာဖြင့် အနာဂတ်မှာ စွန့်ဦးတီထွင်ဖန်တီးပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာစေဖို့ အားပေးရေးသားလျှက်ပါ…
ကျွန်တော်၏ စွန့်ဦးတီထွင်မှုဆိုင်ရာ ဟောပြောမှုများအား ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြင့်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Business Plan စီးပွားရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲနည်း…
စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းများ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖော်ပြထားသော စီးပွားရေး Data (၃၀-ကျော်) အား တနေရာတည်းတွင် လေ့လာနိုင်စေဖို့ (MESI , Entrepreneur SME Institute - EntrepreneurSME.com) မှာ အချိန်တိုတိုအကျိုးရှိရှိ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(၁) ကုမ္ပဏီထူထောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ Company Register ဖောင်ပုံစံများ။
(၂) SME လုပ်ငန်းချေးငွေရယူရန် SME မှတ်ပုံတင်ဖောင်များ၊ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ။
(၇) စည်ပင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် TM ဆောင်ရွက်ပုံ စာရွက်စာတမ်းများ။
(၃) နိုင်ငံတကာနှင့် အကျိုးတူစာချုပ်မှုဆိုင်ရာ Joint Venture, MOU စာရွက်စာတမ်းဖောင်ပုံစံများ။
(၄) Stock Share စတော့ရှယ်ယာ၊ ငွေကြေးဈေးကွက်သုံး စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာချုပ်ပုံစံများ။
(၅) သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် Import – Export ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ ဖောင်ပုံစံများ။
(၆) ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသုံး HR Form များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ရုံးသုံးစာရွက်စာတမ်းများ SOP ဖောင်ပုံစံများ။
(၈) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ Project Valuation, Acquisition ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဖောင်ပုံစံများ။
(၉) Bank ဘဏ် လုပ်ငန်းချေးငွေအသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ Form ဖောင်ပုံစံများ။
(၁၀) Business Plan စီးပွားရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲမှု၊ Project Proposal လုပ်ငန်းစီမံချက်တင်မှုဖောင်ပုံစံများ။
စတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး ဖောင်ပုံစံပေါင်း (၃၀) ကျော်အား စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ Start-up လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူ၊ အကြံညာဏ်ပေးနိုင်စေဖို့ ပံ့ပိုးကူညီပေးလျှက်ပါ။
မြန်မာ့စွန့်ဦးတီထွင်မှုတိုးတက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ပါစေ…
Never Give-up, Passion & Effort make for “Impossible” to “Possible” စာသားနဲ့ အားပေးရင်း…
ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးပဲ၊ ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒ၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည် မဖြစ်နိုင်မှုကို ဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စာရေးသူ - ဇင်ဖြိုးပိုင် (Founder, MESI Business Institute, EntrepreneurSME.com)